लिम्वूवान - विविध सामग्री: विश्वासदीप तिगेला
कोशी अञ्चल धनकुटा जिल्लाको हात्तीखर्क गा.वि.स.मा जन्मनु भएका कवि तथा निवन्धकार विश्वास दीप तिगेला सन् १९९६ मा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको रुपमा आफ्नो सैनिक जीवन आरम्भ गर्नु भएको हो । अद्यावधि उहा सैनिक सेवामा कार्यरत रहे पनि अन्य व्यक्तिहरु भन्दा विल्कुलै पृथक हुनु हुन्छ । यसकारण कि एक हातमा वन्दुक र अर्को हातमा कलम लिएर युद्धका जीवन्त कथाहरु, कविताहरु लेख्नु हुन्छ । हातमा वन्दुक लिनु उहांको पेशा हो भने कलम लिनु जीवनको सार उतार्नु हो । हालसालै तिगेलाको देश बोक्नुको पीडा नामक सस्मरणात्मक निवन्ध संग्रह बजारमा आएको छ । यस संग्रहमा भिन्न भिन्नै ५ देशमा प्रत्यक्ष देख्नु र भोग्नु भएका कुराहरु प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यस भन्दा अघि गृह युद्धको पीडा,सङ्क्षिप्त बोर्नियो परिचय,परदेशीको कोसेली कविताहरु २०५५, जनमुक्ती अभियान (राजनैतिक शब्दावली) २०५६ नेपाली पाठकहरुको सामु पस्कि सक्नु भएको छ । त्यति मात्र नभएर एक दर्जन भन्दा वढी वेभर्साईटको डिजाइन साथै वेलायत तथा व्रुनाईवाट प्रकाशित हुने प्रवासी वेदनाका आवाजहरु पत्रिकासंग आवद्ध हुनु हुन्छ । सैनिक सेवामा रहेर पनि थुप्रै कृतिहरु प्रकाशन गर्ने स्रष्टा तिगेला, गोर्खा सैनिकहरुमा सम्भवत उहां नै पहिलो हुनु हुन्छ । प्रतिभावान व्यत्तित्व तिगेलासंग लिम्वूवान व्लगस्पोट डट कम्का व्लगर टंक सम्वाहाम्फेले गर्नु भएको वार्ता पाठकहरुको समक्ष पेश गरेका छौं ।
१ हालसालै तपाईले देश बोक्नुको पीडा निबन्धसंग्रह ल्याउनु भयो यस बारे पाठकहरुलाई केहि बताई दिनुहोस् ?
युद्धग्रस्त विभिन्न देशहरुमा खट्नु पुगेको बेला मैले १२ बटा देशहरु संग सम्बन्धित मेरा रचनाहरु समेटेर अघिल्लो निबन्ध संग्रह आज भन्दा चार बर्षअगाडी प्रकाशन गरेको थिए । त्यो पुस्तक प्रकाशनले मलाई धैरै प्रोत्साहित गर्यो र पछिल्लो समयमा म जुनजुन देश र ठाँउहरु पुगे त्यहि ठाँउहरुको आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक स्थिती, संस्कारसंस्कृति, सामाजिक रहनसहन र भौगोलिक विविधतालाई समेट्दै हाम्रो देशको विविध पक्ष संग तुलना गर्दै यो देश बोक्नुको पीडा पुस्तकमा सरल ढङले प्रस्तुत गर्ने कोसिश गरेको छु । यो नयाँ कृति पनि मेरो आफ्नै डायरी भएको कारण राम्रा साहित्य छन् भन्न म सक्दिन तर यथार्थ विवरणहरु छन् र अन्य कृतिहरु भन्दा केहीकेही भिन्न चाहि अवश्य छ की भन्ने मलाई लाग्दछ । यो कृतिमा हाम्रो देश बाहेक मैले कामको शिलशिलामा घुमेको विभिन्न ५ वटा देशहरु (कोसभो, केन्या, वेलायत, ब्रुनाई र मलेशिया) संग सम्बिन्धित संस्मरणात्मक अनुभव र अनुभूतिका निबन्धहरु समावेश छन् । देशको तरल परिस्थितीमा एक सच्चा नागरिकको निष्पक्ष, निर्भिक विचार, फाल्टो दृष्टिकोण सहित पाउन सकिन्छ भनि आदणिर्य समिक्षक ज्यूहरुले भन्नु भएको छ । यो कुराको लेखाजोखा गर्ने त यहाँ पाठकहरुकै जिम्मा हो ।
२. भर्खरै नेपाल पुगेर आउनु भएकाले लिम्वूवान सम्वन्धि केहि कुरा बुझ्नु भयो कि ?
हजुर, लिम्बूवान राज्यको निम्ति लिम्बू दाजुभाईहरु साच्चै नै लाग्नु भएको छ । लिम्बूवान राज्यको निम्ति आन्दोलन भइरहेको बखत म स्वयं पनि विराटनगरबाट इटहरी सम्म रिक्सामा जानु पर्यो । वहाहरुले साच्चै लिम्बूवान क्षेत्रलाई तताई राख्नु भएको रहेछ ।
३. अहिले लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन प्राप्तिको लागि आन्दोलन जारी छ यस बारे तपाईको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ ?
यो सकारात्मक कदम हो । एउटा विशाल रुख हुनको निम्ति धेरै हाङ्गाविङ्गा र त्यो हाङ्गाहरुमा थुप्रै पातहरु हुनु पर्दछ । स्वायत्त राज्य भनेको हो त्यहि एउटा हाँङ्गा हो । तिनै हाँङ्गा र हाँङ्गामा हुने पातहरु चाहि स्वायत्त राज्य र जनताहरु हुन । धेरै हाँङ्गा र पातहरु भएको रुख स्वत सुन्दर, आकर्षण र बहूउपयोगी हुन्छ । जतिसुकै स्वायत्त राज्यको चर्चा भए पनि त्यो एउटा रुखको सवाल हो । भौगोलिक रुपमा, भाषागत रुपमा, जातिगत रुपमा र धार्मिक रुपमा असमानता रहेको हाम्रो मुलुकमा संघीय राज्य प्रणाली भन्दा राम्रो अरु कुनै प्रणाली हुनै सक्दैन । हिजोको एक देश एक भाषाको शोषणयुक्त दुश्प्रयास नै आजको यो आक्रोस हो, शिक्षा हो । हामीले एकात्मक शासन असफल भएको प्रत्येक्ष अनुभव गरि सक्यौ त्यसैले फेरी पनि त्यहि खाडलमा हाम फाल्ने दुश्साहस कसैले गर्नु हुदैन । यसको अवस्था तातिएको फलाम जस्तो छ । यतिबेला ज्यादै सजग र संचेत रहनु पर्ने बेला हो । फलाम फेरी कहिल्य नतातिने गरि सेलाउन सक्छ । एक टुक्रा फलामको हसियाँ बनाउने की खुकुरी बनाउने अहिल्य नै निक्र्यौल गर्नु पर्ने समय आएको छ । हिजो १०४ बर्ष अनि ३० बर्ष १२ बर्षसम्म सुते पनि आज सबै उठ्नु पर्ने बेला आएको छ । आखिर यो असारमा रोपेको धान मंसिरमा पाक्छ त्यसवेला आनन्दले खाउला बसौला । तर यो धान रोप्ने असारको समयमा हामी कोहि नसुतौ, वेवास्त नरहौ ।
४. लिम्वूवान क्षेत्र भित्रै धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार स्थापनाको लागि संयोजन गरी रहनु भएको छ त्यसैले यो पुरस्कार कुन क्षेत्रकोलाई र कहिले देखि कति राशिको दिईने भएको छ ?
म धनकुटा प्रतिभा पुरस्कारको निम्ति केही धेरथोर खटि रहेको मात्र छु । संयोजन नै भन्न मिल्दैन की ? संयोजक सोसरह खट्ने हामी धेरै छौ । अझ हाम्रो कार्यनीति अनुसार धनकुटेली हामी सबैनै संयोजक हो । यो कामले कसैलाई ब्यक्तिगत रुपमा क्रेडिट जादैन । यो संस्थाको संस्थापक आदीइत्यादी केही हुदैन । देशमा भएका, विदेशमा भएका, जन्मको आधारमा, कर्मको आधारमा धनकुटेली कहलिएका हामी सबैको साझा भावना नै यो संस्था हो । संस्थाको काम सबैसबैले गर्नु भन्नुको अर्थ कसैले नगर्नु भन्ने पनि हुन जान्छ तर त्यो सम्बन्धमा हामी संचेत छौ । लिम्बूवान क्षेत्र हो भन्ने सवाल संग यो पुरस्कारको कुनै सम्बन्ध हूदैन । भोलि धनकुटा जिल्लाको नाम तम्मोर जिल्ला रहे पनि, लिम्बूवान राज्य वा किरात राज्य वा अरुकुनै राज्य नाम रहन गए पनि यसको नाम धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार नै रहनेछ । साहित्य र संगीत समाजको दर्पण हो । त्यसैले सभ्य समाज, सहिष्णु समाज र समय सापेक्ष विज्ञान समाज बनाउनको निम्ति मुख्य गरि साहित्य र संगीतको क्षेत्रमा रहेका हाम्रा प्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत एवं सम्मान गर्ने साथै धनकुटाको प्रतिष्ठा आउने प्रकारको कुनै पनि काम (खेलकुद, परिक्षामा उत्कृष्ट विद्यार्थी, समाजसेवी) गर्ने ब्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने उद्देश्य रहेको छ । साहित्य र गीत संगीत अन्तर्गत विभिन्न जातजातिको भाषाहरु पनि पर्नेछ । जस्तैः संस्कृतमा श्लोक लेख्नेहोस वा तामाङ भाषामा कविता लेख्नेहोस । संस्थाको लागि पैसा उठाउने काम धमाधम चलि रहेको छ । कोसभो, जर्मन, कतार, साउदी, हङकङ, मलेशियाबाट रकम जम्मा हुनेक्रम जारी छ । अन्य देशहरुबाट पनि सक्रियता र सहयोग आउने आसा गरेका छौ । सहयोग यतिनै हुनुपर्छ भन्ने छैन । एक रुपैया नै सहयोग दिए पनि लिन्छौ । हामीलाई लाग्दछ सबैमा संस्थाप्रति आफनत्वको भावनाहोस, मेरो हो भन्ने दायित्व बोधहोस । कति रकमको पुरस्कार दिने सवालमा हामी संग अहिले झण्डै २ लाख जति अक्षयकोष जम्मा भएको छ । यो सांकेतिक कोष स्वरुप मात्र भएको छ । शुरुवात भर्खर मात्र हुदैछ । त्यहि अक्षयकोषको ब्याजबाट पुरस्कार दिने योजना हो तर अप्ठ्यारो चाहि के छ भने धनकुटाका सरकारी बैकले एकदमै थोरै ब्याज दिने र निजी फाइनान्सहरुलाई सधै विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने । अक्षयकोष धनकुटा कै बैकमा राख्ने र्सवसम्मत निर्णय अनुसार पहिलो चरणको रकम बैकमा जम्मा भइसकेको छ । पैसा आफैमा एउटा ठूलो समस्या हो । ठूलो रासी उठेको खण्डमा सहि र पारदर्शि रुपले संचालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल पनि चलिरहेको छ । त्यसैले यति नै रकमको पुरस्कार भन्न अहिल्य नै अलि अप्ठ्यारो भएको छ यद्यपी प्रत्येक बर्ष प्रदान गर्ने योजना हो तर त्यसरी प्रत्येक बर्ष प्रदान गर्दा पुरस्कारको खासै ठूलो महत्व नहून सक्छ भन्ने कुरा भर्खरै आएको छ । त्यसको टुङ्गो आगामी बैठकले गर्नेछ । यदि प्रत्येक बर्षको सट्टा दुइ वा तीन बर्षमा एक पटक प्रदान गर्ने निर्णय भएको खण्डमा सामान्य राम्रै पुरस्कार रासी रहने छ । संस्था वैधानिक रुपले दर्ता भई सकेको छ । संस्था संचालनको लागि कनिष्ठ देखि बरिष्ठ ब्यक्तिहरुको पनि संलग्नता रहेको कारण संस्था मजवुत बन्दै गएको छ । संस्थाको वेभपेज तयार भइसकेको छ । विश्वभर छरिएर विभिन्न ठाँउमा रहेका हाम्रा जिल्लावासीहरुलाई यहि www.dhankuta.org.np वेभपेजले जोड्ने काम गरिरहेको छ ।
५. लिम्वूवान स्वायत राज्य प्राप्तिको लागि हामी विदेशमा बस्ने लिम्वू लेखकहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? लेखकको मात्र नभएर सम्पूर्ण लिम्वूहरुको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ होला तपाईको बिचारमा ?
हाम्रो देश नेपालमै रहेर साथिभाईहरुले ज्यानकै बाजि थापेर स्वायत्त राज्यको लागि लडिरहेका छन् । उनीहरुले तन, मन, धन दिएर महत्वपूर्ण समय खर्चेर लडि रहेका छन । यो माग यो आन्दोलन, खोसिएको घर फर्काउने आन्दोलन हो । त्यो घर अवश्य फर्किनुपर्छ । त्यो घर हामी सबैको हो । असारको रोपाइमा नजानेले मंसिरको जाउलो खान लजाउनु पर्छ । जो हामी विदेशमा छौ, भौतिक रुपले सम्भव नहोला तर नैतिक, आर्थिक र बौद्धिक अर्थात आ-आफ्नो ठाँउबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि आजैबाट सहभागि हुनुपर्छ र धेरै साथीहरु लागि रहेका पनि छन् । रोप्ने र गोड्ने समय यहिबेला हो तब समयले एकदिन मूल्याङ्न अवश्य गर्नेछ । लेखकहरु समाजका द्धिग्गज बर्गहरु अवश्य हुन । उनीहरुले सहि र सत्य कुराहरु विभिन्न कोणबाट लेखेर संचेत र जागरुग गराउन सक्नुपर्छ । आखिर रुसी क्रान्तिको निम्ति मेक्सिम गोर्किको आमा उपन्यासको ठूलो भूमिका भएको स्वीकार्ने हो भने हाम्रो कलमले पनि क्रान्तिका कुराहरु किन नलेख्ने ?
६. आजको युगमा लिम्वूवान स्वायत राज्य लिम्वूहरुले माग्नु कतिको सान्दर्भिक ठहर्याउनु हुन्छ ?
मैल यो प्रश्नको उत्तर माथि नै दिइ सकेको छु । स्वायत्त राज्य सान्दर्भिकताको सवाल होइन अब अनिवार्यता हो भन्ने मलाई लाग्दछ । सघीय शासन प्रणालीमा सबै समस्या हल हुने जादु पक्कै छैन तर बर्तमानको एकात्मक शासन प्रणाली भन्दा धेरै राम्रो अवश्य छ । सबै राष्ट्रहरु आत्मा गौरवका साथ अटाउनेछन् । सामान्यतया ठूलो परिवार एउटै घरमा सधै अटाउन सक्दैन तर थप घरहरु बनाएर एउटै कम्पाउण्डमा चाहि बस्न सक्दछन् सधैका लागि । सबैसबैको भारी सधै बोक्नु सम्भव हुदैन त्यसैले केन्द्रले आ-आफ्नो भारी उनीहरुलाई नै सुम्पनु बुद्धिमता ठहर्छ । बरु जटिल सवालमा, साह्रोगाह्रोमा केन्द्र सरकारले संरक्षण तथा नियन्त्रणको हैसियत अवश्य राख्नु पर्दछ । संघीय प्रणालीका वेफाइदाहरु पनि धेरै छन् । जस्तै भारत सिक्किमका मान्छेहरु वेष्ट बङ्गाल आउदा सतर्क रहनु पर्छ, पिरोलिनु पर्छ तर तपाई पूर्वको मान्छे पश्चिम महाकालीमा पुगे पनि तपाइलाई कुनै पीर, डर हुदैन आदी । जातिय सवाल परालको कुन्यू जस्तो हो ।कथाकदाचित आगो लागेमा ध्वस्त हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । त्यसैले हामी सबै आगैआगो भए पानी को बन्ने ? अन्याय सहनु पनि पाप हो भनिन्छ भने अब यो पाप कति सम्म गरि रहने ? लिम्बूहरुको संख्यात्मक आधारमा नेपालको राजनैतिक वृत्तमा भएको उपस्थिती निरासाजनक खासै छैन । तर त्यो उपस्थिती स्थायी भने होइन । यद्यपी अब नयाँ ढङ्गले पनि सोच्न सक्ने अवस्था चाहि छ । हामीले बिर्षनै नहूने कुरा के पनि हो भने - विभिन्न अवसरहरु जस्तै निजामति, सेना, प्रहरीमा समानुपातिक अवसर अनिवार्य हुनु पर्दछ ।
७. लिम्वूवान स्वायत राज्य पुनस्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा तपाई कतिको आशवादी हुनुहुन्छ ?
गर्भ बसि सकेपछि सवल बच्चाको जन्म हुनु राम्रो मानिन्छ । भविश्यको कुरा गर्दा ठ्याक्कै नहून सक्छ तर मलाई लाग्दछ स्वायत्त राज्यको कुरा ९ महिनाको गर्भ हो । अहिले सरकारको असक्षमताको बारे पनि बहस चल्न शुरु भएको छ । धेरै नेताहरु गुण्डागर्दि पृष्ठभूमिबाट आएका छन । उनीहरु बौद्धिक रुपमा अत्यन्तै दर्रि्र छन् । यिनै नेताहरुको सरकारबाट ठूलो आस गर्न सकिन्दैन । यो वेला देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिका बीचको हुनु पर्ने सन्तुलन राम्रो संग भईरहेको छैन । यद्यपी सरकार ढलेन भने स्वायत्त राज्यको माग सकारात्मक जान सक्छ । सरकारले पनि संघीय राज्यको लागि प्रतिबद्धता स्वरुप संसदबाट घोषणा गरि सकेको छ ।
८. इतिहासले र विभिन्न प्रमाणहरुले लिम्वूवानको अस्तित्व अझै पनि खारेजी नभएको देखिन्छ तर नेपाल सरकारले भने लिम्वूवानको मागले देश विखण्डनमा धकेलिएको भनेर हाम्रो मागलाई टार्ने गर्छ यस बारे तपाईको धारणा ?
आफू कमजोर भएपछि आफ्नै छाँया संग तर्सने अवस्था आउछ । सरकार आज त्यस्तै कमजोर छ त्यसैले उ तर्सेको मात्र हो । साच्चै भन्ने हो भने देशलाई विखण्डनबाट जोगाउन स्वायत्त राज्य माग गर्नेहरु लागि परेका छन् । राज्य हिजो र आज पनि देश विखण्डन गर्न लागि परेको छ । विरामको पीडा त रोगीलाई थाह हुन्छ नी । नेपाल एकिकरणको कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला कतिपय राज्य संन्धि र सम्झौतामा गाभिएका छन् । त्यसबखत कतिपय विशेष अधिकारहरु तिनै राज्यमा निहित रहने संम्झौता थियो । शक्तिको आडमा सम्झौता बिषिर्एर धोका दिनु महागल्ति थियो भने अहिले आएर अधिकारको कुरा उठाउनु स्वभाविक हो । सरकारले के बुझ्नु पर्दछ भने नेपाली समाज परिवर्तन भएको छ र देश विखण्डनबाट जोगाउने एउटै मात्र उत्तम उपाय स्वायत्त राज्य प्रदान गर्नु हो । स्वायत्त राज्यको मागलाई फेरीपनि टार्ने कोसिस गर्नु भनेको पराजित मानसिकता हो ।
९. लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि लिम्वूवान पार्टी सक्रिय भएको पाईएको छ अव यी पार्टी र लिम्वूहरुले लिम्वूवानको लागि कस्तो भूमिका निभाउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ ?
सैद्धान्तिक रुपमा हेर्नेहो भने पनि धेरै पानी अटाउन धेरै भाडा चाहिन्छ । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रत्येक भाडा भित्र पानी नै हुनु पर्यो र कुनै भाडाको पानी दुगर्न्धित हुनु भएन । धेरै पार्टी बन्नु स्वभाविक हो । चुरो कुरो के हो भने बिहान दिउसो मेलापर्म जतासुकै गए पनि बेलुकी त घरै आउनु पर्छ । त्यसैले सबै पार्टी आ-आफ्नो कार्यक्रम लगे पनि स्वायत्त राज्यको माग चाहि निर्विवाद हुनु पर्दछ । धेरै हाम्रा पार्टी बीच खिचातानि पनि देखिएको छ । जसले गर्दा देशबाहिर रहेकाहरु सहयोग गर्न तयार छन तर कुन पक्षलाई गर्ने भन्ने बिषयले गर्दा अलमलमा परेका छन् । यसवेला हाम्रा पार्टीले निश्चित समयको लागि मात्र भए पनि सामुहिक मोर्चा बनाउन अति आवश्यक छ । अन्यथा लङ्गडो नै लङ्गडोको जमात जस्तो मात्र हुनेछ ।
१०. लिम्वूवानको विषयलाई हामी जस्ता लिम्वू लेखकहरुले साहित्यमा उतार्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन ?
यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले जे जे सम्म सकिन्छ त्यो सबै गर्नु पर्ने समय हो । साहित्य र संगीत आन्दोलनको निम्ति अन्यन्तै ठूलो उर्जा हो । यसलाई हामीले आफ्नो स्वायत्त राज्य स्थापनाको लागि प्रयोग गर्नु पर्दछ । आजको यो स्वायत्त राज्यको रोपाइमा ककस्ले कति योगदान दिए त्यसको लागत कलमको माध्यायमले पनि राख्दै जानु पर्छ ।
११. तपाईको नया योजना केहि छ कि ?
सधै केही न केही नयाँनया काम गरुं लाग्छ । ब्यक्तिगत र सामुहिक धेरै योजनाहरु छन् । पहिलो प्राथमिकता भन्नु पर्यो, पढ्नको लागि अहिले अलि बढि समय छुट्टाएको छु । दोस्रो कुरो अनलाईन नेपाली साहित्य मंच मार्फ कविता र गजलको प्रतियोगिता तुरुन्तै गर्ने योजना छ । साथिहरु संग विचार विमर्श चलि रहेको छ । पुरस्कार चाहि नगद र प्रमाण-पत्र रहने छ । तेस्रो कुरा नेपालमा अहिले नयाँ संविधान बनाउनको लागि छलफल र बहस चलि रहेको छ संविधान सभाकै लागि चुनाव गर्ने तयारी भइरहेको छ । अझ संमग्रमा भन्ने हो भने देशको राजनीति नै नयाँ संविधान, राम्रो सविधान बनाउन उन्मुख छ । यहि प्रसंगलाई ख्याल राख्दै नेपालको नयाँ संविधानको प्रतियोगिता नै पो गराउने हो की भनेर गृहकार्य हुदैछ । त्यसमा कानुनका विद्यार्थीहरु तथा इच्छुकहरुको सहभागिता रहने छ । जसले गर्दा भोलि संविधान निर्माताहरुलाई सानो एउटै मात्र कुरामा सहयोग पुग्न सकेमा मात्र पनि ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ । यो योजना निक्कै ठूलो बजेटको रहने छ र प्रतियोगिताबाट घोषित हुने प्रथम संविधान निर्माताले ठूलो रकमको पुरस्कार साथै सहभागी प्रत्येकको मेहनत अर्थात सविधान बनाउनु भनेको एउटा अत्यन्तै जटिल विषयको पुस्तक बनाउनु हो । त्यसैले प्रत्येक सहभागीले खर्च बापत केही रकम प्राप्त गर्नेछन् । चौथो परदेशिएका नेपालीहरुको डायस्पोरिक साहित्यको बारेमा अध्यायन गरि रहेको छु । हेरौ मन र विचार त धेरैधेरै छ गर्न चाहि कति सम्म सकिन्छ ।
१२. लिम्वूवान व्लगस्पोट मार्फत सम्पूर्ण लिम्वूहरुलाई केहि शन्देस दिन चाहानु हुन्छ कि ?
र्सवप्रथम मेरा केही कुराहरु राख्न पाएकोमा लिम्वूवान व्लगस्पोट परिवारलाइ धन्यवाद । एक नागरिकको हैसियतले बोल्दा ठाडै हुन गई अशोभनिय पो भयो की ? गल्तिहरुमा माफ पाँउ । आफ्नो घर, परिवार र समुदाय जस्तो अरु केही हुनै सक्दैन । समय आउछ पर्खन्दैन । हामीहामी सबै ब्यूझिउ र अरुलाई पनि ब्यूझाऔ । आपसी हितका विषयमा विचारहरु आदान प्रदान गरौ । प्रतिक्रिया, सल्लाह सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दछु । त्यसको लागि मेरो ठेगाना हो biswas@post.com
Posted by limbu at 6:55 PM
Publication, Hosting and Dating said...
It is nice and balanced.
Kpeep it up.